Fabio Capello oo kusoo biiray musharrixiinta xulka Talyaaniga! – Gool FM
(Roma) 30 Maarso 2018 – Macallinkii hore ee kooxaha AC Milan, Roma iyo Juventus ee Fabio Capello ayaa lasoo werinayaa inuu soo galay musharrixiinta u taagan qabashada xulka Talyaaniga.
Sida uu qabo Libero, ‘waa suurtagal inay is fahmaan xiriirka FIGC iyo Capello kaddib markii uu macallinkani iskaga tegey Jiangsu Suning Arbacadii dhowayd, isagoo noqon kara ninka ku habboon soo nooleeynta Talyaaniga.
Capello iyo xiriirka ayaan isku aragti marna noqonin sanadihii dambe, balse haatan waxaa soconaya isbedello lagu doonayo in lagu sameeyo Calcio guud ahaanba, iyadoo uu halkaasi haatan madaxwayne ku xigeen ka yahay ardaygiisii hore ee Alessandro Costacurta.
Capello ayaan ku cusbayn ciyaaraha caalamiga ah, isagoo England ku hoggaamiyay KA2010, halka uu Ruushka laylinayay 4 sano kaddib kii lagu qabtay Brazil.